Raha laharam-pahamehana ny fiainana, tokony hitsangantsangana ve ianao?
Home » Lahatsoratra farany farany » Cruising » Raha laharam-pahamehana ny fiainana, tokony hitsangantsangana ve ianao?
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Cruising • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Tokony hitsangantsangana ve ianao?
Na dia sarotra amiko aza ny mino, dia olona 30 tapitrisa isan-taona no mandany fotoana sy vola be (150 miliara dolara isan-taona) amin'ny sambo fitsangantsanganana, na dia mamorona tontolo iainana tonga lafatra amin'ny fihanaky ny aretina mifindra aza.
Ny sambo fitsangantsanganana dia miaraka amina olona marobe ao amin'ny habakabaka feno olona kely sy mihidy ahafahan'ny aretina miely avy amin'ny olona iray mankany amin'ny iray hafa na mifindra amin'ny alàlan'ny sakafo na rano, ary, ao amin'ity "tanàna mandeha" ity dia olona an'arivony no mizara rafitra fanadiovana sy HVAC. Hanampiana ny fahasarotan'ny tontolon'ny sambo fitsangantsanganana dia ny zava-misy fa ny olona avy amin'ny kolotsaina samihafa, miaina fiaviana fanefitra isan-karazany ary tonga miaraka amin'ny toe-pahasalamana isan-karazany. Ny aretina dia miainga avy amin'ny aretin'ny taovam-pisefoana sy ny GI (izany hoe ny norovirus) ka hatramin'ny aretina azo sorohana vaksin (eritrereto ny aretin'akoho sy kitrotro).
Ny mpandeha sy ny ekipa dia mifampiraharaha amin'ny efitrano fisakafoanana, efitrano fialamboly, spaoro ary dobo, mampitombo ny fahafaha-mampita zavamiaina ao amin'izy ireo. Mandritra izany fotoana izany, ny mpitsabo areti-mifindra dia manana fahafaha-miditra amin'ny sakafo na famatsian-drano na ny rafitra fanadiovana sy HVAC izay zaraina manerana ny sambo ka miteraka aretina sy / na mety maty.
Rehefa tafidina an-tanety ny vondron'olona mpandeha iray dia vitsy dia kely ny fotoana anaovan'ny mpiasa an-tsambo fanadiovana tanteraka ny sambo alohan'ny hahatongavan'ireo vondrona manaraka; ho fanampin'izay, ireo ekipazy ireo ihany dia mijanona hatrany amin'ny vondrona iray mba hahafahan'ny mpikambana ekipa iray voan'ny virus mandatsaka sela ary, amin'ny tranga COVID-19, izay maharitra 5-14 andro vao miseho, am-polony (na an-jatony) no mety voan'ny virus iray. olona.
Ho fanampiana ny olana, ny mpandeha sy ny ekipa dia mivoaka sy mivoaka ny sambo amin'ny seranana samihafa ary mety iharan'ny aretina sy aretina any amin'ny toerana iray, ento an-tsambo, zarao amin'ireo mpandeha sy ekipa, ary avy eo aparitaho amin'ireo olona mipetraka ny seranan-tsambo manaraka.
Tsy ny voalohany
Tsy vao sambany no lasa lovia Petri ho an'ny aretina. Ny teny hoe "quarantine" dia avy amin'ny fitambaran'ny aretina sy ny sambo. Rehefa nanimba ny tany Eoropa ny Fahafatesana mainty tamin'ny taonjato faha-14 dia tsy nikatona tanteraka ny zanatany Venetian, Ragusa, namela lalàna vaovao ho an'ny sambo mitsidika (1377). Raha tonga avy tany amin'ny toerana nisy ny areti-mandringana ireo sambo ireo, dia noterena hiondrana an-dranomasina mandritra ny iray volana izy hanaporofoana fa tsy mpitondra ny aretina. Nitarina 40 andro ny fotoana amoron-dranomasina ary nofaritana ho quarantino, italianina ho an'ny "40."
Fitsangatsanganana an-tsambo: Raharaha fiainana sy fahafatesana
Tamin'ny 1 Febroary 2020, mailaka iray avy amin'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana ao Hong Kong no nampandre ny Princess Cruises ny zava-misy fa mpandeha 80 taona no nanaporofo fa voan'ny virus coronavirus vaovao taorian'ny nialany tamin'ny Diamond Princess tao an-tanànany. Albert Lam, epidemiolojista ho an'ny governemanta Hong Kong dia nanoro hevitra ny fanadiovana lehibe ny sambo.
Tsy nisy na inona na inona nitranga raha tsy ny ampitson'iny (2 Febroary 2020) rehefa Dr. Grant Tarling, filoha lefitry ny vondrona ary Lehiben'ny mpitsabo ho an'ny Carnival Corporation (ao anatin'izany ny Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line, Seabourn, P&O Australia ary HAP Alaska) dia nanamarika izany olana izany tamin'ny alàlan'ny media sosialy.
Carnival dia miasa sambo fitsangantsanganana 9 misy sambo 102 mahery ary mitondra mpandeha 12 tapitrisa isan-taona. Ny orinasa dia maneho ny 50 isan-jaton'ny tsenan'ny fitsangantsanganana an-tany ary, Dr. Tarling, satria ny dokoteran'ny orinasa dia tompon'andraikitra amin'ny famaliana ireo valanaretina. Rehefa namaky ilay tatitra i Dr. Tarling, dia tsy nisy afa-tsy ny protokolota ambany indrindra ihany no navaliny.
Ny Diamond Princess voasoratra anarana anglisy no sambo fitsangantsanganana voalohany nanoratra areti-mandringana lehibe teto an-toerana ary natokana ho karamaina tao Yokohama iray volana teo ho eo (hatramin'ny 4 Febroary 2020). Tao amin'ity sambo ity 700 mahery no voan'ny aretina ary 14 ny olona maty. Volana vitsivitsy taty aoriana (2 Mey 2020), sambo fitsangantsanganana 40 mahery no nanamarina tranga tsara tao an-tsambo. Tamin'ny 15 May 2020, Carnival dia nanoratra ireo tranga MOST Covid19 (2,096) nisy fiatraikany tamin'ny mpandeha 1,325 sy mpikambana 688 tao amin'ny ekipa niteraka fahafatesan'olona 65. Royal Caribbean Cruises Ltd. dia nitatitra tranga 614 fantatra (mpandeha 248 voakitika ary ekipa 351), ary 10 no maty. https://www.miamiherald.com/news/business/tourism-cruises/article241914096.html
Fotoana ho an'ny mpisolovava
Tamin'ny 15 May 2020, nitatitra i Tom Hals avy amin'ny Reuters fa, tamin'ny tranga Covid45 miisa 19, 28 no nanohitra ny Princess Cruise Lines; 3 no nifanohitra tamin'ny sambo fitsangantsanganana hafa; Orinasa mikarakara hena 2; Walmart Inc; Mpandraharaha fonenana zokiolona 1; Ivontoerana fikarakarana 2; Hopitaly 1 ary vondrona mpitsabo 1.
Raha ny filazan'i Spencer Aronfeld, mpisolovava manana trangana virus coronavirus maromaro mbola miandry dia: "Ny fizarana zotra fitsangantsanganana amin'ireto karazana tranga ireto dia sarotra be", satria misy fiarovana maro ny sambo fitsangantsanganana: tsy orinasa amerikanina izy ireo ary tsy iharan'ny lalàna mifehy ny fahasalamana sy fiarovana. toy ny lalàna momba ny fiarovana sy ny fahasalamana (OSHA) na ny lalàna amerikana manana fahasembanana (ADA).
Tsy misy mahazo antoka ny amin'ny fizotrany. Ny Repoblikana dia liana amin'ny fiarovana ny orinasa amin'ny fitoriana raha ny Demokraty kosa dia mifantoka amin'ny famonjana. Fiarovana amin'ny trosa no hiarovana ny orinasa amin'ny fitoriana ataon'ny mpiasa sy ny mpanjifa izay mety hilaza fa ny tsy fitandreman'ny orinasa dia namorona tontolo iainana lavorary voan'ny trangana aretina. Raha nanana ampinga ny orinasa dia mety hanome azy ireo fahatokisan-tena hisokatra indray (mihevitra ny orinasa fa tsy meloka noho ny tsy fitandremana, ny tsy fitandremana na ny fitondran-tena niniana natao); na izany aza, ny fanesorana ny fandrahonana ho tompon'andraikitra dia mety hanakivy ny mpanjifa tsy hiverina amin'ny làlana fitsangantsanganana an-tsambo, kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, trano fandraisam-bahiny ary toeran-kafa na hanohy hetsika hafa isan'andro. Ny iray amin'ireo fanamby lehibe ho an'ny mpanjifa sy ny mpiasa dia ny fisoratana an-tsoratra hoe aiza avy no nanao ahoana ny fifandraisan'izy ireo tamin'ny virus (izany hoe amin'ny fitateram-bahoaka mankany / avy am-piasana, tamin'ny fihetsiketsehana na fihetsiketsehana an-dalambe).
Orinasa marobe (izany hoe manana ny Princess Princess i Carnival Corporation), misoratra amin'ny sambo misy azy ireo any amin'ireo firenena miaraka amin'ny lalàna maivana momba ny asa. Mampalahelo fa mila asa be ny olona avy amin'ireo firenena ireo ary ny fiheverana fa tsy dia ilaina loatra ny toeram-pialan-tsambo sambo, ambany ny tahan'ny karama ary tsy dia misy fiarovana ny asa - Ireo fepetra teo aloha ireo dia tsy sakana amin'ny fikatsahany. ho an'ny asa, satria ny asa sasany sy ny fizahana karama dia tsara kokoa noho ny fomba hafa.
Zava-dehibe ny manamarika fa misy ny maha samy hafa ny mpiasa sy ny mpiasa. Ny mpikambana ao amin'ny sambo dia misy ny mpandroso sakafo ary ny mpanadio misy trano fatoriana amin'ny "B-deck" (hita eo ambanin'ny lalan'ny rano) ary manolotra fomba fanamboarana bunk misy eo anelanelan'ny farafara fatoriana 1-4, seza iray, toerana kely anaovana akanjo ary angamba fahitalavitra ary telefaona. Ny dingana manaraka eo amin'ny tohatra hierarchy dia ireo Staffers izay mety hahitana mpampiala voly, mpitantana, mpiasan'ny fivarotana ary manamboninahitra ary omena efitrano tokana ao amin'ny "A-deck", eo ambonin'ny faran'ny rano izy ireo.
Ireo mpiasa amin'ny sambo fitsangantsanganana dia miasa 7 andro isan-kerinandro mifototra amin'ny fifanarahana izay mihodina mandritra ny volana maromaro. Ny mpiasa iray ao an-dakozia mpanara-maso dia mety hahazo $ 1949 isam-bolana ary miasa 13 ora isan'andro, 7 andro isan-kerinandro mandritra ny 6 volana (2017). Raha tokony hijanona iray andro tsy iasana dia miasa amin'ny fihodinana mihodina ny mpiasa, noho izany dia mahazo fotoana isan'andro.
Ireo aretina dia mahita ny toerana falifaliany
Ny efitrano fandraisam-bahiny / fisakafoanana akaiky an'ny mpiasa, miaraka amina fandaharam-potoana miasa mafy, dia miteraka tontolo tonga lafatra amin'ny fihanaky ny aretina. Ho an'ny olona marobe monina sy miasa amin'ny toerana kely dia ampio ny habetsahan'ny mpandeha antitra izay mora tohina kokoa amin'ny aretina miampy ny fihenjanana ara-batana sy ara-tsaina izay mety hahatonga ny aretin-dry zareo ho ratsy kokoa ary ny tontolo tonga lafatra amin'ny fihanaky ny aretina noforonina.
Ny tatitra iray an'ny Center for Disease Control (CDC) dia nahatsikaritra fa ny vondron'ireo ekipa mpiasan'ny Diamond Princess no tena voa mafy dia ireo mpiasan'ny serivisy sakafo any an-tsambo. Nifandray akaiky tamin'ny mpandeha ireto mpiasa ireto ary ny fitaovana sy lovia nampiasain'izy ireo. Amin'ireo mpiasa 1068 ao anaty sambo dia mpiasa an-tsokosoko miisa 20 no nanaporofo fa tsara ho an'ny Covid19 ary 15 tamin'ity vondrona ity dia mpiasan'ny serivisy sakafo. Raha atotaly dia 6 isan-jaton'ny mpiasan'ny serivisy sakafo 245 ao amin'ny sambo no narary.
Gerardo Chowell, epidemiolojika matematika avy ao amin'ny Georgia State University (Atlanta, Georgia) ary Kenji Mizumoto, epidemiolojista iray avy amin'ny Oniversiten'i Kyoto (Japon) dia nahita fa tamin'ny andro nampidirana ny quarantine tao amin'ny sambo fitsangatsanganana Diamond Princess, olona iray no voan'ny aretina mihoatra ny 7 hafa ary ny fiparitahana dia nanamora ny efitrano akaiky sy ny faritra manohina voan'ny virus); na izany aza, raha vao natokana ho an'ny mpandeha dia niparitaka ny olona iray.
Voasazy ny saiko
Na dia misy aza ny angon-drakitra, ny fampitandremana ary ny fahafatesan'olona maro dia maro ny mpanjifa izay tsy hiala amin'ny fitsangantsanganana an-tsambo. Ny MS Finnmarken avy any Hurtigruten dia nandray tsara mpandeha 200 nandritra ny diany 12 andro nanaraka ny morontsirak'i Norvezy. Ireny mpandeha ireny dia anisan'ny sambo fitsangantsanganana an-dranomasina voalohany nitranga satria nampangovitra ny indostria ny valanaretina coronavirus ka nijanona ny fitsangantsanganana an-tsambo. Angamba misy ifandraisany amin'ny fanapahan-kevitra handeha an-tsambo ny jeografia; ny ankamaroan'ny mpandeha dia avy any Norvezy sy Danemarka izay mbola ambany ihany ny tahan'ny aretina ary niato ny fameperana. Ny tsipika fitsangantsanganana Norveziana, tantanan'ny tsipika SeaDream lafo vidy, dia nandao an'i Oslo tamin'ny 20 Jona 2020 ary ny fangatahana famandrihan-toerana dia lehibe tokoa ka nanampy ny dia faharoa tamin'io faritra io ihany ny orinasa.
Paul Gauguin Cruises (mpandraharaha ny Paul Gauguin any Pasifika atsimo) dia voalahatra hanohy traikefa an-tsambo kely amin'ny Jolay 2020, amin'ny fampiharana Protocol COVID-Safe. Nanambara ny orinasa fa noho ny haben'ny sambo, ny fotodrafitrasa ara-pahasalamana, ny protokolota sy ny ekipany an-tsambo dia namorona tontolo azo antoka ho an'ny mpandeha izy ireo. Ny rafitra sy ny fomba fiasa dia natao miaraka amin'ny Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) Mediterranee Infection of Marseilles, ivon-toerana mitarika eo amin'ny sehatry ny areti-mifindra sy ny Tafika an-tsambo mpiady an-dranomasina ao Marseilles
Fanaraha-maso ny olona sy ny entana alohan'ny hipetrahana.
Manaraka ny fomba fidiovana notoroan'ny US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sy ny World Health Organization (WHO).
Làlan-kizorana amin'ny halavirana ara-tsosialy.
Alohan'ny hidirany, ny vahiny sy ny ekipa dia tsy maintsy manolotra taratasim-panafody dokotera voasonia miaraka amin'ny taratasy fangatahana fahasalamana feno, mandalo fizahana ara-pahasalamana sy fizahana ataon'ireo mpiasan'ny sambo.
Ny valizy dia novonoina tamin'ny alàlan'ny zavona fanadiovana na jiro UV.
Saron-tava fandidiana sy lamba, famaohana famonoana otrikaina ary tavoahangy fanadiovan-tanana natolotra ny vahiny.
Rano madio vaovao 100 isan-jato amin'ny staterooms amin'ny alàlan'ny rafitra a / c tsy miverimberina sy ny rivotra mifofofofo novaina amin'ny faritra mahazatra farafahakeliny 5 isan'ora.
Trano fisakafoanana nohavaozina manolotra safidy fisakafoanana tsy misy la carte.
Ny habakabaka dia voafetra tamin'ny isan'ny mponina 50 isan-jato.
Ireo teboka avo lenta (izany hoe ny fakan-varavarana sy ny fantson-tànana) dia voafafa isan'ora amin'ny perocoide EcoLab, manala ny mikraoba, bakteria ary miaro amin'ny fahalotoan'ny biolojika.
Ny mpikambana ao amin'ny sambo dia manao sarontava na visite miaro rehefa mifanerasera amin'ny vahiny.
Nangatahin'ireo vahiny ny hisaron-tava amin'ny lalantsara ary aroso amin'ny toerana malalaka.
Ny fitaovan'ny hopitaly eto an-tsambo dia misy terminal laboratoara finday izay mamela ny fitiliana eny an-toerana ny aretina mifindra na tropikaly.
Fitaovana mandroso diagnostika (ultrasound, radiology, ary fandalinana biolojika momba ny ra) misy.
Dokotera sy mpitsabo mpanampy amin'ny sambo isaky ny mandeha.
Zodiac dia novonoina isaky ny fijanonana tsirairay.
Ny fidirana an-tsambo aorian'ny fitsangatsanganana amoron-dranomasina dia tsy avela raha tsy aorian'ny fitsapan'ny mpandeha ny mari-pana momba ny mari-pana ary hanaraka ny fomba famonoana otrikaretina.
Ireo mpandraharaha fitsangantsanganana an-tsambo any amin'ny firenen-kafa (izany hoe France, Portugal, USA) dia mbola manandrana mamaritra ny daty hanombohana. Azo inoana fa rehefa miverina ny orinasa dia mifantoka amin'ny dia fohy kokoa amin'ny renirano izy ireo ary tsy hiampita sisintany iraisampirenena izay misy lalàna sarotra sy manjavozavo matetika. Ny fameperana ny dia eo amin'ny firenena dia midika fa ny ankamaroan'ny mpandeha fitsangantsanganana dia mety ho mpizahatany ao an-trano.
Mandrosoa. Ny zavatra tsy maintsy ataon'ny tsipika fitsangantsanganana rehetra
Ny Association International Victims Victims Association dia nanoro hevitra hoe:
Manakarama epidemiolojika isaky ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo mba hamaritana ara-tsiantifika ny karazana sy ny fiavian'ilay aretina mifindra. Ny manam-pahaizana dia tokony hotakiana handefa tatitra any amin'ny CDC ary hatao ho an'ny besinimaro amin'ny tranokalan'ny CDC.
Ny Kongresy dia tokony mitaky zotra fitsangantsanganana mankany:
Atsaharo ny fitsangantsanganana an-tsambo manaraka aorian'ny fihanaky ny karazana aretina tsy misy fotoana mety eo anelanelan'ny fitsangantsanganana ho an'ny fanadiovana sy famonoana otrikaretina.
Aloavy ny mpiasa marary rehefa marary.
Avelao ny mpandeha hanafoana / hamerenana indray ny fitsangantsanganana an-tsambo tsy misy sazy rehefa miahiahy ara-dalàna ny fahasalamany manokana izy ireo.
Ataovy mangarahara ary ambarao amin'ny fotoana mety, rehefa nisy sambo niaina aretina, talohan'ny niondranan'ny mpandeha.
Mametraha protokol mazava momba ny mpandeha sy ny ekipa isaky ny misy aretina mila quarantine.
Mampiasà protokol mazava sy mitovy fanamiana miaro ny mpikambana ao amin'ny ekipa amin'ny aretina azo ampitaina ary manome fitaovana fiarovana manokana (PPE) ao anatin'izany ny sarontava, solomaso ary fonon-tanana.
Tokony hijanona ve ianao sa handeha
Raha manapa-kevitra ny hanao sambo fitsangantsanganana ianao, rehefa mahita fa lehibe kokoa noho ny loza ny valisoa, misy dingana vitsivitsy azon'ny mpandeha atao mba hifehezana ny fahasalamany:
Alohan'ny hanaovana famandrihana sambo fitsangantsanganana dia tsidiho ny tranokala www.cdc.gov/nceh/vsp/default.htm ary zahao ny isa navoakan'ny sambo. Ny isa 85 na ambany dia tsy azo ekena.
Fanavaozana ny satan'ny fanaovana tsimatimanota, ao anatin'izany ny gripa, dipteria, pertussis, vaksinin'ny tetanosy ary varicella (raha tsy nisy an'io aretina io).
Makà vaksiny hiadiana amin'ny aretina ateraky ny sakafo toy ny typhoid sy hépatite.
Ny zaza rehetra miaraka amin'ny olon-dehibe dia tokony hanana vaksinin'ny kitrotro.
Ento ny famonoana otrikaretina manokana (ie, ny solo-tànana, ny famafazana otrikaretina, ny fanadiovan-tanana) ary hamafana ny zava-drehetra (valizy, vavahady, fanaka, fametahana, faucet, fanantonana lamba… rehetra).
Aza mikasika ny fandroana fandroana sy ny fantsika. Mampiasà fonon-tànana fanariana na tisu hampisarahana ny rantsantanana amin'ny fitaovana rehetra.
Aza mifanome tanana amin'olona.
Misotroa rano be dia be - mijanona ho hydrated.
Rehefa maheno ny teny hoe "Code Red" ianao dia hidina anaty sambo ny sambo (mety ho vokatry ny fahitana norovirus na aretina hafa.) Amin'izao fotoana izao dia hisokatra hatrany ny varavaram-bahoaka; homena ny sakafo rehetra (tsy misy buffet na fitaovana iaraha-mizara); Mitadiava mpiasa manao fanadiovana mahery vaika sy famonoana otrikaretina amin'ny faritra be sy ny lalantsara.
Ny mpitantana ny sambo fitsangantsanganana dia tokony hanome toro-hevitra amin'ny mpandeha momba ny trangan-javatra mety hitranga sy ny soritr'aretin'ny aretin-kibo ary ny aretin'ny taovam-pisefoana ary ireo soritr'aretina ireo dia tokony hotaterina amin'ny aretin-tsambo raha vao marary.
Ny mpitantana dia tokony hampandre ny mpandeha ny maha-zava-dehibe ny quarantine raha marary izy ireo (mijanona ao an-tranony mba hisorohana ny aretina amin'ny mpandeha hafa).
Aiza no hitodihana
Ny sambo fitsangantsanganana dia miasa amin'ny tontolo sarotra. Tsy misy governemanta na sampan-draharaha mifehy iraisam-pirenena manara-maso ny trangan'ny COVID-19 misy rohy mankany amin'ireo sambo fitsangantsanganana (miaraka amin'ny mombamomba ny besinimaro). Ny tahiry marina dia tokony hisy ary zaraina amin'ny mpanjifa, ny mpandrindra, ny mpahay siansa / mpikaroka ary ny matihanina amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana mba hisy ny tombana azo antoka momba ireo loza ateraky ny fitsangantsanganana. Araka ny filazan'ny Dr. Roderick King, CEO an'ny Florida Institute for Health Innovation, "Raha resaka areti-mandringana dia resaka fanisana no resahina."
Ny departemantan'ny fitaterana any Etazonia dia mety misy fanampiana kely. Ny Federal Maritime Commission (FMC) dia mitaky ny mpiasan'ny sambo mpandeha mitondra mpandeha 50+ avy any amin'ny seranan-tsambon'i Etazonia ho afaka manefa vola amin'ny vahininy raha toa ka nofoanana ny sambo fitsangantsanganana. Ny FMC dia mitaky porofon'ny fahaizana mandoa ihany koa ny fanambarana avy amin'ny ratra na fahafatesan'ny mpandeha izay mety tompon'andraikitra amin'ny mpandraharaha sambo. Raha foanana ny fitsangantsanganana an-tsambo na misy ny ratra mandritra ny dia an-tsambo dia tsy maintsy manomboka hetsika (fmc.gov) ny mpanjifa.
Ny US Coast Guard dia tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ny sambo fitsangantsanganana ary ny sambo mandeha amin'ny ranomasina amerikana dia tokony hanaraka ny fenitra amerikanina amin'ny fiarovana afo, fitaovana famonoana afo sy mpamonjy aina, tsy fivadihan'ny sambo, fifehezana sambo, fiarovana azo antoka, fahaizan'ny ekipazy sy ny ekipazy, fitantanana fiarovana ary fiarovana ny tontolo iainana. .
Ny lalàna momba ny fiarovana sy fiarovana an-dranomasina Cruise Vessel (2010), dia mamaritra ny fepetra fiarovana sy fiarovana ho an'ny ankamaroan'ny sambo fitsangantsanganana izay mivoaka sy miverina any Etazonia. Mandidy ity lalàna ity fa tokony hotaterina amin'ny FBI ny tatitra momba ny asa ratsy.
Ny sambo fitsangantsanganana dia takiana (46 USC 3507 / c / 1) mba hanana torolàlana fiarovana ho an'ny mpandeha. Ity torolàlana ity dia manome fampahalalana izay misy famaritana ireo mpiasan'ny fahasalamana sy fiarovana voatondro an-tsambo hisorohana sy hamaly ny toe-javatra heloka bevava sy ara-pitsaboana ary ny fampiharana ny lalàna misy mikasika ny asan-jiolahy.
Drafitra na toky
Ny Cruise Line International Association (CLIA), indostria iray manohana fikambanana ara-barotra, dia nilaza fa ny indostria dia manaraka ny fampiatoana CDC ny fitsangantsanganana mba hamoronana protokolola izay hanomezana fenitra fitaterana henjana sy fisavana ny mpandeha, ny elanelana lavitra eo amin'ny sambo ary ny vaovao. safidy fanompoana amin'ny sakafo. Azo inoana fa hisy ekipa mpitsabo fanampiny eny amin'ny sambo sy ny fidiovana any amin'ny hopitaly.
Raha ary rehefa manapa-kevitra ny hanao famandrihana fitsangantsanganana an-tsambo ianao, ny antso manaraka dia tokony ho an'ny mpiantoka mba hamaritana ny politika tsara indrindra handrakotra ny zavatra rehetra sy ny zavatra rehetra manomboka amin'ny tongotra tapaka ka hatramin'ny COVID-19. Ny matihanina amin'ny indostria sasany dia manome sosokevitra momba ny politika “Cancel for Any Reason”. Ity dia fanatsarana tsy voatery atao izay afaka mamerina ny vola 75 isan-jaton'ny mpandeha ary izany ihany no safidy mamela ireo mpandeha hanafoana ny diany noho ny antony tsy voasaron'ny politika mahazatra, ao anatin'izany ny fandrarana ny dia na ny tahotra ny handeha noho ny coronavirus.